Emile Randrianantenaina (source photo : http://razafimahazo.free.fr)
Tamin’ny herintaona no efa nahazo azy ity zandrin’i Jean de Dieu Rakotondrasoa na Ravoatabia ity ary tsy mbola namelany ho azon’ny vahiny ny amboara tamin’ity andiany fahavalo tamin’ny Tcim 2011 ity. Laharana faharoa kosa i Alexis Tourtelot, izay mpihazakazaka avy any Atsimo Andrefan’i Frantsa, narahin’i Médéric Clain, izay mpiray klioba aminy ihany koa. Tany amin’ny laharana fahefatra vao hita i Lantonirina Manjakazafy, izay mpiray ekipa amin’i Emile sady nandrandrain’ireo namany fa hahazo izany.
Vokatry ny ezaka nataon’i Emile Randrianantenaina tamin’ireo dingana faramparany no nahazoany izao vokatra lehibe izao. Ny elanelam-potoana vitany, 8 minitra, tao amin’ny dingana fahavalo mampitohy an’i Miandrivazo sy Mandoto no nampiakatra azy teo amin’ny laharana voalohany. Taorian’io dingana io mantsy dia hainy tsara ny nitantana ny tombom-potoana azony. 26 ora 59’ 38’’ no fe-potoana namitany ny halavirana rehetra tamin’ity fifaninanana ity.
Raha ny vokatra mbola tsy ofisialy dia iray minitra mahery kely no elanelany tamin’ny laharana faharoa (Alexis Tourtelot). Mpihazakazaka 58 tamin’ireo 108 niainga tany Toliara sisa no tonga hatramin’ny farany nandritra ny fihodinana ny farihin’Anosy, nentina namarana ny dingana rehetra omaly.
Voninahitra lehibe ho an’ny Malagasy kosa ny tsy nivoahan’ny amboara teto an-tanindrazany.